China Flat Metal Package orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Jitai
Ny fonosana amin'ny lampihazo
Fonosana vy fisaka
Ny trano ipetrahana
Ny vokatra lehibe dia misy fonosana metaly ho an'ny boriborintany mifangaro hybrid, singa opto-elektronika, singa mikraoba, singa sivana onja, singa sensor ary fitaovana avo lenta. Ny vokatra dia mihatra amin'ny faritra toy ny fiaramanidina, aerospace, fitaovana elektronika ary fifandraisana ho an'ny tafika sy ara-barotra. Ny orinasa dia nanao ny tetikasan'ny fikarohana siantifika ambaratonga amin'ny minisitra ary eken'ny mpampiasa.
Ny fonosana metaly fisaka dia mizara ho karazana tapa-damba iray na maromaro. Ny iray-sombiny dia mampiasa sary maoderina lalina, ny singa marobe dia manamboatra fehezam-boninkazo sy ny fotodrafitra vita amin'ny tombam-bidy. Ny fomba fitarihana voalohany dia amin'ny alàlan'ny sisin-dàlana, mety amin'ny fivorian'ny tendrombohitra. .Fampiasaina matetika ao anaty faribolana iray 、 fivoriamben'ny boriborintany mifangaro.
* Ny fonosana dia mampiasa fitaovana kovar na vy mihodina. Ny firafitry ny sombin-javatra marobe dia ny fanamafisana ny fitarihana hafanana. Ny fotony dia mampiasa fitaovana WuCu 、 Oxgyen Free Copper na CRS1010 sns.
* Ny haavon'ny fonosana dia mandray ny filan'ny mpanjifa.
* Ny pins dia mizara ho eraky ny hazo fijaliana erosion simika erika na tsimatra boribory miorina amin'ny endrik'ilay fizarana arakaraka ny safidin'ny mpanjifa.
* Ny toeran'ny pin ny tany dia faritan'ny filan'ny mpanjifa.
* Ny sarony dia natao mifanaraka amin'ny fisehon'ireo fonosana.
* Ny fonosana dia tokony ho electroplating hahazoana fahamendrehana avo lenta amin'ny fampiasa ary ny mpanjifa misafidy fonosana feno plastika Au na mitarika plating Au mifanaraka amin'ny filàna.
* Ny index rehetra dia mahafeno ny fepetra takian'ny GJB548B.
Fizarana faharoa: Fisafidianana fitaovana
Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny trano
Ny CTE dia singa voalohany nodinihina, ny fomba hahatratrarana tsindry ambany dia mitaky fahalalana momba ny fahombiazan'ny fitaovana samihafa ny mpiasan'ny endrika. Aseho amin'ny tabilao 1 、 tabilao 2 ny fitsipiky ny famehezana comperssion ho an'ny fonosana fonosana fisaka.
Ny fitsipiky ny famolavolana ho an'ny fonosana fonosana fisaka
Lavaka / Frame
-429 Voadio ny varahina
Elan13 # Insulator Ceramic
4,450 kabel an'ny varahina
Copper Zirconium Copper maimaim-poana
Ny fitsipiky ny tombo-kase comperssion ho an'ny fitaovana fonosana
-450 4,450 Varahina
Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny sarony
Lasitra famehezana paralle ： -442
Lasary laser: -442,4J29, CRS1010; Stainless vy, AlSi
Fametahana visy: -442,4J29, CRS1010, Stainless vy, firaka aliminioma
Ny famolavolana refy ho an'ny firafitra
3.1: rafitra fanodinana cnc iray
3.2: Rafitra voasintona lalina iray
3.3Ny vatany misaraka brazing rafitra
Misy fotodrafitrasa iray sy fotodrafitrasa miorim-paka, azo inoana fa ny manova ny akoran'ny fotony ho Cu 、 WuCu 、 Dimanond braze sy ny sisa amin'ny fitaovana hampiakarana be ny fitarihana hafanan'ny fonosana.
Ny fitsipiky ny singa ampahany.
Fonosana fisaka no mandray ny firaka amin'ny endriny cyclinder, mahitsizoro, fisaka, miondrika. Ity misy fampidirana tsotra ho an'ny fitarihana manokana:
Ny sokajy fitarihana vy metaly
Ny fitarihana mahitsizoro dia fitarihana etching simika miaraka amina scamea0.3mm * 0.4mm mahazatra
Izy io dia voahodina amin'ny alàlan'ny fisaka ny fitarihana mahitsy cyclinder.
Raha jerena ny fiolahana, ny fitarihana miondrika dia mizara zorony zorony shape endrika Z miondrika. Araka ny tsipika fiampitana ny fitarihana, ny fitarihana mitanatana dia nozaraina ho zana-zana-bozaka sikolika koa, zorony mahitsizoro. Indraindray isika dia afaka namolavola ireo lohany mifatotra mifatotra isaky ny filan'ny mpanjifa ampiasaina .
Ny famolavolana ny fonosana fisaka dia ny endrika Z miondrika, ny fitarihana dia afaka misafidy cyclinder na fitarihana mahitsizoro misy savaivony≤0.8mm (savaivony ＞ 0.8mm, tsy azo aondrana amin'ny tsoroka roa).
Ny famolavolana trano fonenana herinaratra dia fitarihana boribory mahitsizoro matetika, ary bisikileta no mitarika.
Previous: Ny trano ipetrahana
Manaraka: Ny fonosana amin'ny lampihazo
Maody graphite fahadiovana avo lenta
Fizarana fonosana metaly
Kitapo Sensor Pressure